China Abenzi bePakethe yokutya yokutya kunye nabathengisi | Imiqobo yokukhokela
Ingxowa yokuPakisha yokutya yeCoccum
Ukupakisha ukutya okuphefumlayo kunceda ukugcina izithako zintsha kwaye zikulungele ukusetyenziswa.
Le bhegi yokupakisha yenza kube lula ukugcina iziqhamo kunye nemifuno kunye nenyama kunye neenkukhu. Into ebaluleke kakhulu ekuphekeni kwe-sous vide, iingxowa zokupakisha ezincamathelayo zezona zinto kufuneka zongezwe nakweyiphi na ikhitshi enethemba lokwandisa ukhetho lwazo kwimenyu ukubandakanya izitya zevidiyo. Kukwalungile ukugcina kwisitokhwe seengxowa zokupakisha kuzo zonke iimfuno zakho zokugcina ukutya!
● Ilungele ukugcinwa kokutya ixesha elide
● Ukukhanya, ukufuma, isithintelo seoksijini kunye nePuncture Resistant
● Ukuze ufumane iziphumo ezihle, gcina ukutya okufuma ukufuma okuninzi
● Iingxowa zetywina lobushushu zokuzikhusela
● Isithintelo esingqongqo somoya sigcina ubutsha kunye nencasa yoqobo, ivumba kunye nombala wokutya okugciniweyo
Ukupakisha i-vacuum yindlela yokupakisha esusa umoya kwiphakeji ngaphambi kokutywina. Le ndlela ibandakanya (ngesandla okanye ngokuzenzekelayo) ukubeka izinto kwiphakheji yefilimu yeplastiki, ukususa umoya ngaphakathi kunye nokutywina iphakheji. Ifilimu ye-Shrink ngamanye amaxesha isetyenziselwa ukulunga ngokuqinileyo kwimixholo. Injongo yokupakisha into yokuthambisa ihlala isusa ioksijini kwisitya ukwandisa ubomi beshelufu bokutya kwaye, kunye neefom zepakethi eziguqukayo, ukunciphisa ivolumu yemixholo kunye nephakheji.
Ukupakisha i-vacuum kunciphisa ioksijini yomoya, kuthintela ukukhula kweebhakteria ze-aerobic okanye ifungi, kunye nokuthintela ukukhutshwa komphunga wezinto eziguqukayo. Kukwasetyenziselwa ukugcina ukutya okomileyo ixesha elide, okufana neenkozo, amandongomane, inyama ephilisiweyo, itshizi, intlanzi etshayiweyo, ikofu kunye neetshipsi (iicrispis). Ngexesha elifutshane ngakumbi, ukupakisha okungafunekiyo kunokusetyenziselwa ukugcina ukutya okutsha, okufana nemifuno, inyama, kunye nolwelo, kuba kuthintela ukukhula kweentsholongwane.
Igama lomxholo Ikhefu Ingxowa yokutya yokutya
Izinto eziphathekayo PA / PE, PET / PE, nenayiloni njl
Ukusetyenziswa Iziqhamo / Imifuno / Ukutya kwaselwandle / Inyama / iinkukhu njl
Uphawu Ukutya / Frozen / Microwaved / Strong
Isatifikethi ISO-9001, ingxelo yovavanyo ye-FDA / ingxelo yovavanyo lwe-SGS njl.
Ixesha lokuzisa Kuthunyelwe ngeentsuku ezili-15 ukuya ku-20 emva kokuhlawula
Egqithileyo Indawo yoBume bePakethi
Okulandelayo: Rice Umshini Packaging Bag
Iibhegi zokuPakisha ngokutya okuqhelekileyo
Ingxowa yokutya yokutya
Ukutya Packaging Plastic Bags
Ukutya Packaging Ziplock Bag